Wakaumbwa Hydraulic Press, Smc Hydraulic Press, Yakadzika Dhizaini Press - Zhengxi
Zvigadzirwa zvikuru zvekambani, senge zvinoumbwa nemichina yekudzvanyirira, tensile hydraulic michina [...]Verenga Zvakawanda
Kufunga nezve hydraulic michina yekumusoro otomatiki michina uye isina murume musangano.Verenga Zvakawanda
Tichifunga nezve mushure mekutengesa sevhisi Tsigira kupihwa kwezvipenga zvikamu Vashandi vese vekambani [...]Verenga Zvakawanda
Yakachengetedza kubatana kwepedyo nemayunivhesiti mazhinji anozivikanwa epamba uye masangano ekutsvagisa kwenguva yakareba uye yakazvipira kuve piyona wehunyanzvi mu hydraulic muchina indasitiri.
TIRI PASI POSE
Zvigadzirwa zvikuru zvekambani, senge zvinoumbwa nemichina yekudzvinyirira, tensile hydraulic michina, hupfu unogadzira hydraulic michina, kuumba hydraulic michina, uye kururamisa hydraulic michina, akagashirwa zvakanaka nevatengi vekumba nevekunze.
Wakaumbwa SMC BMC hydraulic ...
4 ikholamu yakadzika kudhirowa hydra ...
Otomatiki Ferrite Magnetic ...
Otomatiki SMC Kugadzira Li ...
Dyara 1: 9000SQM Dyara 2: 48000SQM
Vanenge zana nemakumi mashanu emunhu
Vanopfuura makumi matanhatu sets
Kuburitsa Machine Kukosha muna 2017
Iyo hombe uye iine yakazara machining maitiro mudunhu reSichuan
Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Kugadzira Co, Ltd. iri mune yakanaka Qingbaijiang Mahara Ekutengeserana Nzvimbo yeChengdu. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye45,608 mativi emamirimita, kusanganisira inorema workshop nzvimbo yemakumi matatu emazana emamita mita. Iyo hombe-pamwero nyanzvi gadziriro yemagetsi ekudhinda muChina. Iyo kambani ine vanopfuura zana mainjiniya uye mahunyanzvi uye gumi nemaviri emunyika ekugadzira patent. Yakachengetedza kubatana kwepedyo nemayunivhesiti mazhinji anozivikanwa epamba uye masangano ekutsvagisa kwenguva yakareba uye yakazvipira kuve piyona wehunyanzvi mu hydraulic muchina indasitiri.
Kuti ishandire zvirinani vatengi, Zhengxi Boka rakagadzawo matavi maviri: Chengdu Zhengxi Robotics Co, Ltd.-inotarisana ne hydraulic michina yekumusoro otomatiki michina uye isina kumisikidzwa musangano. Chengdu Zhengxi Smart Technology Co, Ltd.-inotarisana neshure-rekutengesa sevhisi Tsigira kugoverwa kwezvipenga zvikamu. Vashandi vese vekambani vanoedza zvisingaite kuti "Zhengxi" ive mukurumbira wepasi rose!
Kambani yedu inowedzera kushandiswa kwenyika uye indasitiri zviyero, kunyatso kudzora maitiro ega ega, kuvimbisa mhando yechinhu chimwe nechimwe. Mushure mekunge zvishandiso zvatsvedza kumutengi wedu, tichaita yakazara seti yekuongorora nezve mashandiro emidziyo yedu, tobva tavandudza hunyanzvi hwedu nehunhu. Isu takawanawo ISO9001: 2008 uye CE chitupa. Iyo kambani ndiyo hombe uye iine yakakwana michina maitiro mudunhu reSichuan.